Muxuu ka yiri Zidane, kaddib guuldaradii niyadjabka aheyd ay kala kulmeen kooxda Paris Saint-Germain?? – Gool FM
Dajiye September 19, 2019
(Paris) 19 Sebt 2019. Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa qirtay inuu si aad ah kaga xun yahay guuldaradii xanuunka badneyd ay xalay kala kulmeen naadiga Paris Saint-Germain.
Paris Saint-Germain ayaa guul ay u qalantay kaga gaartay Real Madrid kulankeeda ugu horeeyay GROUP A ee tartanka Champions League, kaddib markii ay kaga adkaatay 3-0.
Zinedine Zidane ayaa u arka in saddexda xiddig khadka dhexe ee kooxda Paris Saint-Germain ay ka fiicnaayeen, saddexda khadka dhexe ee kooxdiisa.
Dhinaca kale macalinka reer France ayaa tilmaamay in kooxdiisa Real Madrid aysan sameynin fursado ku filan ee goolka hortiisa ah, inkastoo 2 gool ay kala dhaliyeen xiddigaha Bale iyo Benzema laga diiday.
Haddaba Zidane oo kasoo hor muuqday warbaahinta kaddib ciyaarta ayaa wuxuu u sheegay:
“Si kastaba, ma sameynin qaab ciyaareedkii loo baahnaa, qaab ciyaareedkan oo kale, xaalada waxay kugu noqoneysaa mid dhib badan, aad ayeey nooga fiicnaayeen”.
“Ma aysan jirin fursado badan si aan goolal u dhalino, inkastoo aan helnay labo fursadood, iyo 2 gool ee la joojiyay, laakiin tani kuma filna”.
“Waxaan u maleynayaa in ciyaarta aysan noo fiicneyn, ma aanan ku fiicneyn xaaladaha oo dhan, gaar ahaan bartamaha garoonka, looma baahna in xaallada intaas laga sii xumeeyo, waa inaan qiranaa inaysan maalinteena aheyn isla markaana aan guuldareysanay”.
Waxaa xusid mudan in xiddigii hore ee kooxda Real Madrid ee Ángel Di María uu dhaliyay 2-dii gool ee ugu horeysay shabaqa goolhaaye Thibaut Courtois qeybta hore ee ciyaarta, kahor inta uusan Juan Bernat dhalinin goolka 3-aad, daqiiqadihii dheeriga ahaa ee dheesha lagu daray.